Boqolaal lagu xiray Puntland - BBC News Somali
Image caption Dad lagu xiray Puntland
Maalintii labaad waxaa magaalooyinka waawayn ee Puntland ka socda olole lagu qabqabnayo dadka dhallinyarada ah ee aan joogin goobaha shaqada ama waxbarashada gaar ahaan dadka ka soo jeeda koofurta Soomaaliya waxana habeenkii xalay dib loo celiyay dad 500 ka badan oo laga qabtay magaalada Bosaso iyo kuwo kale oo iyana laga qabtay kontorolka Garowe.
Ololahan oo galay maalintii labaad marka loo eego magaalada Bosaso waxaa maanta lagu qabtay dad kale oo aad u fara badan kuwaas oo lagu hayo goobo loogu talagalay waxana la filayaa markii la kala saaro ka dib in loo qaadi doono magaalada Galkacyo sida ay sheegayaan saraakiisha maamulka ee arrintan gacanta ku haysa.
Weli lama hayo tirada rasmiga ah ee maanta la qabtay hase ahaatee dadku waxay sheegayaan in dad badan la qabqabtay. Saraakiisha dawladda qaarkood oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in weli aan tirakoob lagu samayn dadka la qabtay maadaama ay hawshu weli socoto.
Dhinaca kalana dadkii shalay laga qabtay qaybtood oo ay tiradoodu dhan tahay 513 waxaa loo gudbiyay dhinaca gobolka Mudug ka dib markii shalay galabtii laga qaaday magaalada Bosaso iyagoo ay wadaan baabuur waawayn oo kuwa xamuulka ah ayna galbinayaan ciidanka dawladda.
Dadkaas oo dhammaantood dhallinyaro ah intii aan la qaadin waxaa loo qaybiyay sahay aan badnayn ay jiscin ka dhigtaan inta ay waddada ku sii jiraan sida uu ii sheegay guddoomiyaha gobolka Bari.
Qayb kale oo dadkaas ka tirsan oo tiradooda lagu sheegay inay ku dhow dahay 400 kuwaas oo la xaqiijiyay inay u dhasheen degaanada Puntland ayaa iyana lagu hayaa magaalada Bosaso waxana loo hayaa sida la sheegayo in la baaro oo la ogaado xaaladdooda dhabta ah iyo waxa ay qabtaan.
Magaalada Garowe laftigeeda kama marna ololahan waxana lagu qabtay dad ay tiradoodu dhan tahay 76 qof oo horay loo qabtay iyo 10 kale oo xalay la qabtay kuwaas oo lagu qabtay koontorolka xiga dhinaca Galkacayo.
Lama oga sida uu yahay qorshaha maamulka marka la eego muddada uu socon doono ololaha dadka lagu qabqabanayo ee haddana dib loogu masaafurinayo dhinaca koofurta Soomaaliya.